Abavelisi bezihlangu china abavelisi kunye nabathengisi
Xa usiya kuthenga, ngaba ukhe waqaphela ukuba uninzi lwezihlangu zisebenzisa izihlangu ukwenza izihlangu zibe nefashoni nangakumbi kwaye zibe nomtsalane. Ngokubanzi, izihlangu zingumnini wobude obuqhelekileyo. Ubude bayo bunokulungiswa. Imibala eyahlukeneyo, iinkqubo ezahlukeneyo kunye nezinto ezahlukeneyo, ubukhulu zisetyenziselwa imitya yezihlangu, iyenza ibalasele. Ngoncedo lwezihlangu zezihlangu, nazo izihlangu ziyaqaqamba. Imibala yimibala eqinileyo. Nguwuphi umbala onokulingana nezihlangu? Ukuba izihlangu ziyimidlalo yeemfashini, imibala edibeneyo kunye nemibala yomnyama ingasetyenziswa. Ukuba izihlangu zinemibala eqhelekileyo, imibala eqinileyo inokusetyenziswa. Ukuba ezi zisetyenziselwa ubusuku obusebenzayo, ukusebenzisa "ukukhanya kwimibala emnyama" yinto efanelekileyo.Re iilogo, ngamanye amaxesha ilogo inokuprintwa kwizihlangu kodwa ngamanye amaxesha, ilogo inokuongezwa kwimitya yezihlangu. I-logo ingaba ushicilelo silkscreen, ushicilelo offset, ushicilelo sublimated, ephothiweyo njl Njengomthengisi obalulekileyo weMidlalo yeOlimpiki kunye nepaki yeDisney, ukukhetha kwethu kuya kunika umbono wakho onzulu kumaxabiso, umgangatho, ukuhanjiswa komhla kunye nenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa. Nxibelelana nathi ngokukhawuleza!